amabhalikhoni e-Mer .com - I-Airbnb
amabhalikhoni e-Mer .com
Asnelles, Normandie, i-France
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-André
I-Superb Villa, i-seafront, ukufinyelela ngqo ebhishi elihle lase-Asnelles. Enkabeni yesayithi engokomlando, ukusuka ku-terrace uzobona izivalo zetheku elidala le-Arromanches elingamakhilomitha angu-3 kuphela, imizuzu engu-20 ukusuka e-Asnelles ukuthola i-Bayeux Cathedral yayo kanye ne-tapestry yayo edumile.
Phakathi nenkathi yasehlobo, ukubhukha kwenziwa kusuka ngoMgqibelo kuya kuMgqibelo.
Esitezi esiphansi amagumbi okulala angu-3 avulekile, indawo evamile enezinto zombhede ezingu-140 zekhwalithi enhle ye-bz, igumbi lokugezela, 2wc. Phezulu egumbini elikhulu lokuphumula elihlanganisa igumbi lokuphumula, igumbi lokuphumula, ikhishi elivulekile, igumbi elincane lokuphumula le-TV. Ithala elikhulu elinokubukwa kolwandle okumangazayo.
Shayela isango, ukufinyelela ebhishi kuqondile.
Le villa inendawo esezingeni eliphezulu, uze uyithole.
Sinikeza ilineni yombhede.
Njengenketho singanikeza amathawula namashidi asebhishi (€ 10/umuntu)
ubusuku obungu-7 e- Asnelles
Izitolo zingaphansi kwebanga lezinyawo Idolobhana lase-Asnelles liyikhaya lezitolo zokudlela ezidumile ze-gourmet LA Cale inyama yendabuko isitolo esikhulu esincane esidayisa amabhikawozi imboni edumile ye-biscuit LES Sables d ASNELLES thola abakhiqizi be-oyster i-club yasemanzini kanye nedolobhana elihle
Hlola ezinye izinketho ezise- Asnelles namaphethelo